musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Yacine Adli Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane June 16, 2020
Isu tinopa yakazara yakakwana yeYacine Adli Childhood Nyaya, Biography, Upenyu hwepakutanga, Chokwadi chemusikana, nhoroondo yemhuri, Vabereki, Hupenyu hweMunhu neHupenyu. Kuongorora kwakazara kwezviitiko zvinoshamisa kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira.
Hupenyu hwepakutanga uye Kukura kweYacine Adli. 📷: Instagram uye Twitter
Ehe, iwe neni tinoziva ari pakati anorwisa anotariswa mumwe wevadiki vakanaka muEurope kuchengeta ziso. Nekudaro, vashoma chete ndivo vakaverenga Yacine Adli's Biography, izvo zvinoshamisa. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Yacine Adli Yehukama Nyaya:
Kutanga uye pamberi pezvese, vabereki veiye mutambi wenhabvu vakamutumidza zita Zinedine Zidane, iyo feat iyo yakamupa mazita akazara- Yacine Zinedine Adli. Iye akazvarwa musi we 29th waChikunguru 2000, muVitry-sur-Seine, imba diki iri munzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweParis, France.
Yacine Adli ndomumwe wevana vatatu vakaberekwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, Mr naAmai Abdennour Adli. Nhabvu weFrance akakura ari mwana anofara, padivi pehanzvadzi yake mukuru uye munun'una anoenda anonzi Lounes Adli.
Kuva mwana mudiki wemhuri yeAdli zvinoreva kuti ndiye mwana weveimba yake. Pakutanga, Abdennour (baba vaYacine), akaita kuti vana vake vese vadzidze kuverenga pazera ramakore mana. Little Yacine aisava musiyano.
Kunyanya, apo vabereki vaYacine Adli vakaisa mutoro wakawandisa kuvana vababa vake vakuru, iye pachake aive asina hanya. Asiri kutumwa kuti aite mabasa mazhinji epamba naamai vake uye baba vake akaona mukomana wechidiki achipa nguva yake yenhabvu. Izvi zvakatungamira kune rake rekutanga zuva nekwavo.
Inoratidzwa pazasi, mukomana akanaka akatsigira PSG semwana uye aive akakurisa fanika yezita rake Zinedine Zidane uyo waanomuona seanopfuura chidhori.
Mudiki Yacine Adli akatsigira PSG semwana. 📷: Twitter
Yacine Adli Mhuri Yemashure:
Nhabvu whiz mwana, akasiyana nevamwe French goalie Hugo Lloris uye bhirionea nhabvu, Faiq Bolkiah asina kuberekwa mumhuri yakapfuma kwazvo. Kufanana nevakawanda vevhareji, vabereki vaYacine Adli vaive mhando iyo yakagara mune imwe yeaya nzvimbo dzekupararira dzinowanzogarwa neVitry-sur-Seine's yepakati-kirasi vanhu.
Yacine aive nemakore ekutanga anofara muVitry-sur-Seine, gungano reFrance riri 11.6km kure neguta reParis. Kusiyana nevanotamba nhabvu senge Iraima Konate avo vakagara muParis semwana, mhuri yaYacine Adli yaingokwanisa chete kugara mumafuro.
Iyo French Genius yakakurira muVitry-sur-Seine. Kunyanya zvakadaro, imba yake yemhuri yaive pedyo ne 11.6km kuenda kuParis. 📷: Google Mifananidzo uye IG
Yacine Adli Mhuri Dzinobva:
Kutonga nemeso ake akanaka eArabhiya, tinoziva iwe ungangofungisisa, pamusoro pekuziva Yacine Adli's mum uye nyika yababa vake kubva. Chokwadi ndechekuti, mutambi wenhabvu, seNhoroondo Zinedine Zidane, ine mhuri yake yakabva kuNorth Africa, chaizvo Algeria.
Maizviziva here?… Vese vari vaviri vabereki vaYacine Adli vane midzi yavo kubva kumusha weKabylie unowanikwa munharaunda ine makomo kuchamhembe kweAlgeria. Kusiyana nemumwe mutambi wenhabvu, Riyad Mahrez, Mhuri yaYacine Adli haisati ichipa humbowo nezvekuti iye angangotamba mukombe we2019 Africa Cup of Nations akakunda (Algeria).
Yacine Adli Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kufanana nevakawanda vebhora vari kuda vana vanokura mumaguta eParis, vabereki vaYacine havana kumubvumira kudzikisira dzidzo yake yenhabvu pakutanga. French webhusaiti Acufoot, mumushumo we 2017, yakatsanangura nzira iyo mutambi wenhabvu airatidzira huchenjeri mukirasi. Yacine Adli uyu aive akangwara mudzidzi aive akamira pakati pevezera rake.
Vese avo vaimuziva vangabvuma kuti mutambi wenhabvu aive asiri mwana akangwara, asi achikwikwidza kunyanya munzvimbo yemitambo. Nhabvu, yaaitamba kumba uye chikoro ndiyo chete mutambo waimufadza.
Kana nguva yacho ikava chaiyo, kuda kwemutambo uyu kwakaona vabereki vaYacine Adli vachibvumira mwanakomana wavo kuisa pangozi dzidzo yake yebasa renhabvu.
Kutora danho rekuisa hwaro hwebasa, Yacine Adli akaita kuti baba vake vanyore kwaari kuUS Villejuif, kirabhu iri padyo nemhuri yake. Nomufaro, iye akabudirira kuyedzwa.
Pamazuva ake ekutanga ebasa, mukomana mudiki akazova mwana anochena, iye akawana mukurumbira kwete nezvemitambo yake asi nekupa zvibairo zvisina kujeka zvese muzita rekupfuura.
Pane imwe nguva, mudzidzisi wake anonzi Moulay Chebab akapa nhoroondo yekutsunga kwaYacine Adli kuti abudirire. Mumashoko eaimbova murairidzi;
Yacine akarara kunhandare, izvo zvandakamuona achizviita mazuva ese. Aive mwana anofarira uye aibata-bata.
Iye mukomana mudiki aisakwanisa kumira pfungwa yekurasikirwa. Iye anoda, kutaura uye anodya nhabvu.
Kunyangwe kana achiuya kuzondishanyira, haazosiyi asina kurovera bhora.
Yacine Adli Biography- Nzira yekuFame Nhau:
Kuburikidza nekushanda nesimba uye kuzvininipisa, mudiki Yacine pasina nguva akava mutambi akanakisa pakati pevacheche vese vanotamba kuUS Villejuif. Chinhu chimwe chete chakave chokwadi panguva yaakanyanya kupenya. Icho chaive chokwadi chekuti makirabhu akakura, izvo zvinofarirwa nePSG zvaiuya kuzopambwa netarenda rake.
Kutarisana nemamwe makwikwi akakosha uye mukuda kwekudaidzwa nevechidiki yenyika yeFrance, vabereki vaYacine Adli vakabvumira mwanakomana wavo kuti ajoine PSG. Nechemumoyo, nyeredzi iri kusimukira yenhabvu yakawana French U16 kushevedzera makore maviri mushure mekujoinha hofori dzeFrance.
Kana Mhuri yake paakaita Rokupedzisira Chibairo:
Kuziva chishuwo chemwanakomana wake kuti abudirire, baba vaYacine Adli, Abdennour, aifanira kusiya basa rake kuitira kuti atarise zvakanyanya kukura kwemwanakomana wake. Kuona kuti mwanakomana wekupedzisira weAdli Mhuri aizozvikurira, Yacine mukoma mukuru, Lounes akasarudzawo kutora kosi yeajenzi kosi netariro yekutsigira mukoma wake mudiki.
Yacine Adli Biography- Kuita Kwaakaita Akabudirira:
Nekuda kweboka rakawanda rekushanda nesimba uye nekuedza kwemhuri, mutambi wenhabvu anovimbisa akazova mumwe wevanonyanya kufarira varidzi vemitambo muhudiki hwake. Sezvacherechedzwa pazasi, Yacine akawana kubudirira kwakawanda pairi mbiri chikoro uye nyika.
Basa revechidiki pasi pechikwata uye nyika yaive rakabudirira rakakura kuvimbisa muFrench wenhabvu. 📷: Instagram
Mugore ra 2018, iyo whiz mwana akapedza kudzidza kuhuduku hwePSG mune inoyerera mavara. Mushure mekupedza kudzidza, akapedza gore aine Paris Saint-Germain B. Ari ikoko, mukuru wemurairidzi Unai Emery, aive nemutsa wakaringana kubatsira wechidiki kuti abve pachangu.
Kuve mutambi mukuru pazera gumi nemasere, sezvineiwo, zvinoreva kutarisana nemakwikwi echikwata chakafanana nePSG. Kutanga, kubviswa kwemudiwa wake Emery kuArsenal kwakagadzira twist. Kutevera kubuda kwa Aaron Ramsey, Emery aive pakutsvaga sarudzo dzekusimbisa maGunners epakati uye ese ari maviri Denis Suarez naJacini vakava vanyori vekumusoro.
Zvinosuruvarisa, kutama kwakakundwa mushure meizvozvo-mutsva wePSG mudzidzisi Thomas Tuchel's vakapindira. Iyo opera yesipo yakazopera mushure mekunge Unai Emery afunga kuenda nayo Mattéo Guendouzi. Nekuda kwekusarudzika kwevamwe vekumusoro-svomhu vePSG vekumusoro pamusoro pake, aichena Yacine Adli akafunga kuenda kunozviratidza paBordeaux, izvo zvaakaita nemavara anobhururuka (Vhidhiyo uchapupu pazasi).
Panguva yekuisa Yacine Adli's Biography, wechidiki wePSG prodigy ari kutozviitira zita neFC Girondins de Bordeaux.
Yacine zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo inokura ikaita imwe yeiyo anonyanya 'kukosha' epakati midfielders muEurope. Vamwe vese, sekutaura kwedu, inhoroondo.
Yacine Adli Anoda Hupenyu- Musikana, Mukadzi?
Kubva azviitira zita, vateveri vanodzidzisa vatanga kufungisisa nezvehukama hwehukama hweFrance nhabvu. Kuti utaure chokwadi, Yacine Adli ari pakati pesarudzo yedu weimwe yepamusoro-gumi vazhinji vakanaka vatambi venhabvu parizvino papasi. Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti chimiro chake chakanaka chaisazokwezva vanogona kunge vasikana- kunyange avo vanozvitora sevakadzi zvinhu.
Nekuti iye akareba uye akanaka, vateveri vatanga kubvunza… Ndiani musikana waYacine Adli? 📷: Instagram
Anoshamwaridzika nhabvu panguva yekunyora, anoita kunge akaedza kusaburitsa musikana wake kana iye waanogona kuve mukadzi wake wemangwana. Kunyange zvakadaro, zvinogona kuve kuti Yacine haana kuroora (panguva yekunyora), chirevo chinoreva kusavapo kweWAG.
Zvakanaka, iwe neni tinoziva nhabvu inogona kuregererwa kana zvasvika pakuzvisanganisa nenyaya dzekupfimbana, kunyanya panguva ino yekutanga basa. Ichi chingave chikonzero nei Yacine achiri kuratidza musikana wake.
Yacine Adli Hupenyu hweMunhu:
Kure nhabvu, hunhu hwekutanga kucherechedza nezvemuridzi wenhabvu ndiye "Kukura" kwake. Lounes, mukoma wake mukuru, akamboti Yacine munhu anonyara uye anofunga, mumwe wakaramba uine hukama hwakasimba neavo vakamuona achikura. Ichi, pakati pevamwe, ndicho chikonzero nei munhu wese achimuda.
Zvakare nezve hupenyu hwake, iye nyeredzi inomuka ine hunhu hweCancer Zodiac chiratidzo. Maizviziva here?… Imwe yehumhu Cancer zodiac vanhu vane yavo fananidzo yekuzorora padyo kana mumvura.
Iyo French nyeredzi yeUpenyu Hupenyu Chokwadi chinoratidza zvinhu zvausina kumboziva nezvake. 📷: Instagram
Kunyanya padivi pehama yake, Yacine Adli anoita chess. Nyeredzi yebhola inodawo violin, piyano uye gitare. Akadzidza kuridza gitare nokushandisa kudzidzisa nzeve. Adli akambotaura kuti angadai aida dai baba vake vakamunyoresa muchikoro chemimhanzi.
Yacine Adli Mararamiro:
Mutambi wenhabvu anoshandisa sei mari yake? ... Chekutanga uye chakakosha, hakuna chinhu chakadai seanosarudzika mararamiro. Kutanga, Yacine Adli uyo ane mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora euros anorarama hupenyu hwakarongeka, humwe husina mari yekushandisa pazvinhu zvakaita sedzimba hombe nemota dzinopenya.
Yacine Adli's Mararamiro- Maitiro anoita mutambi wenhabvu mari yake, 📷: IG
Yacine Adli Hupenyu hwemhuri:
Vanhu vazhinji vane vanofambisa tsoka mumhuri yavo vanoedza kuzviita, rimwe zuva, nokudada vanotakura zita remhuri pachidanho chikuru chevose. Iyi ndiyo kesi yeiyo nyeredzi iri kusimuka yeFrance. Muchikamu chino, tichakuudza zvimwe pamusoro pemhuri dzemhuri dzaYacine Adli kutanga nevabereki vake.
Pamusoro paYacine Adli baba naamai:
Kutanga kuenda, vabereki vese vari vaviri vanoona vanofunga avo pamwe nevana vavo vatatu, vanoumba imba yakabatana. Maizviziva here?… Abdennour nemukadzi wake vakatora kufemerwa kubva Lebron James, Kylian Mbappe uye Neymar kumhanya nhabvu-centric imba. Ivo vaviri baba vaYacine naamai vanoona avo vari pamusoro pebhola sevanhu vane hukuru hwemhuri kuvapo mumabasa avo.
Wedu Adli mugwagwa we mukurumbira biography nyaya akaona baba vake vachiita kuzvipira kwekupedzisira kusiya basa kuti agone kutsigira mwanakomana wake kusvika padanho repamusoro. Nhasi, Abdennour ari kukohwa kubudirira kwemwanakomana wake.
Maererano ne Eurosports France, Yacine ane hanzvadzi yakura uye mukoma anonzi Lounces Adli. Kutanga uye pamberi pezvese, Munin'ina wake mukuru mudzidzi akadzidza kutaurirana nekushambadzira, aine chinangwa chekushandisa iyo munda kubatsira hama yake diki.
Kune rumwe rutivi, Yacine mukoma mukuru (Lounes Adli) zvakare akapedza kuyunivhesiti, mumwe akadzidza zveupfumi-manejimendi. Mushure mekupedza zvidzidzo zvake, Lounes akaenderera mberi nekutora kosi aine tarisiro yekuwana chitambi chake chezenisi. Mukoma mukoma akaita izvozvo saka aizove zvakare anobatsira pabasa raYacine. Imhuri yakanyatsobatana!
Yacine Adli Chokwadi:
Chokwadi # 1- Kutambura Kwake Mari Yemubhadharo Kunoburitsa Unhu hwake:
Mutambi wenhabvu anosarudza kusiya PSG kuenda kumakwikwi etsiva FC Girondins de Bordeaux haisi nyaya yemari chete sekucherechedzwa kwake muhoro. Yacine mutambi akasimba bhasiketi anoziva kuti aizo, pasina nguva, kuzviita zvakakura zvese maererano nebasa uye kuwana.
Mari yekuwana muPound (£)
Mapato muDhora ($)
Kwegore € 336,000 £ 297,121 $368,608
Pamwedzi € 28,000 £ 24,760 $30,717
Pa Vhiki € 7000 £ 5,705 $7,078
Pazuva € 1000 £ 815 $1,011
Pa Awa € 41.6 £ 33.96 $42
Per Minute € 0.69 £ 0.57 $0.71
Chechipiri € 0.01 £ 0.009 $0.01
Izvi ndizvo YACINE Adli akawana kubva pawakatanga kuona peji ino.
Wakanga uchiziva here?… Wepakati mugari wemuFrance anowana kutenderedza € 3,093 angangoda kushanda kweanenge makore mapfumbamwe uye mwedzi mumwe kugadzira izvo Yacine anowana mumwedzi. Je! izvi zvinoreva kuti muhoro wake hauna kushoma sekufunga kwedu.
Chokwadi # 2- FIFA Prospect:
Yacine, muhudiki hwake wemakore 19, ane mukana wekuve mumwe weiyo Chikuru Midfielders vezera rake. Panguva ino nyowani, iye 6 tsoka 1 mudiki ari kutangidza nebhola kudzora, kuona, kugadzikana, FK kunyatso, kupfura simba, kudzikisira uye kupfupisa.
FIFA Potential anoratidza akagadzwa kuve mumwe wevadiki vepakati vechizvarwa chake. 📷: SoFIFA
Chokwadi # 3- Anogovana Mumiririri wake neVafambi veMhando yepamusoro
Maizviziva here?… Yacine Adli ane mumiririri kunyangwe kupindira kwenhengo dzemhuri kumubata. Nhabvu wenhabvu anogovana mumiririri mumwe nevamwe vatambi vechiFrench- izvo zvinofarira Moussa Sissoko, Ousmane Dembele naLayvin Kurzawa.
Chokwadi # 4- Ane zita Rakafanana neZidane:
Maizviziva here?… Vabereki vaYacine Adli paakabarwa vakaita kuti azive zita rake (Zinedine) mushure meFrench Soccer Legend Zinedine Zidane. Iro zita angangodaro akapiwa kwaari nekuda kwezvikonzero zviviri. Chekutanga inyaya yekuti mhuri yaYacine Adli ine imwe yakafanana neAlgeria yekutanga pamwe neFrance 1998 mukombe wepasi rose, Zidane.
NeChipiri, inogona kunge iri nzira yekuremekedza mutambi wenhabvu, nekuda kwemabasa ake muFrance 1998 mukombe wepasi rose. Rangarira, yedu chaiyo Yacine akazvarwa makore maviri mushure mekombe yenyika.
Mazita Akazara: Yacine Zinedine Adli
Akazvarwa: 29 Nyamavhuvhu 2000 (zera 19 sekuna Chivabvu, 2020).
Mhuri Kubva: Kabylie musha, Algeria.
Vabereki: Mr. naAmai Abdennour Adli
Hanzvadzi konama: Lounes Adli (An Agent)
Hanzvadzi sikana: Iye akapedza kudzidza kutaurirana nekushambadzira
Kureba mu Tsoka: 6 tsoka uye ina inches
Kureba muMeters: 1.86 M
Hobbies: Kutamba Violin, Piano uye Guitar.
Net yakakosha: € 300,000 (Chivabvu, 2020 zviverenge).
Ndatenda nekuverenga nyaya yehudiki uye biography yaYacine Adli. Tinovimba wakanakidzwa nazvo. Vagadziri vedu paLifeBogger vanoedza nekururamisa uye kururamisa muhurongwa hwezuva nezuva hwekuburitsa nyaya dzehupenyu hwepakutanga uye biography yeanofarira nhabvu.
Nomutsa taura nesu kana kana iwe ukaona chimwe chinhu chisinga tarise chaicho pane chino chinyorwa pa Adli. Zvikasadaro, tiudzewo muchikamu chetsanangudzo, zvaunofunga nezvebasketball netarisiro yakanaka.